Iphalishi - omunye izitsha endala ohlonishwayo multivarka - sesimanje Amatebhe isimangaliso epanini. A kubahlanganisa ukuthi lokudlela e multivarka a esiphundu. Akuzange burns futhi usinda isitofu, ulungiselela umthwalo ngesikhathi esithile. Uma abanikazi ukudla ungajahi, ulinde ukudla lwabo olufudumele nenjabulo fresh.
Ukuze lokudlela e multivarka aphumelele, kudingeka ukuqonda isimiso sokulungiselela yayo. Multivarka bekhubazekile lapho iyasha ngokuphelele futhi ubamba ketshezi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlonipha olinganise. Uma, ukwenza isibonelo, irayisi namanzi ukuthatha ngokulinganayo, yebo, irayisi izohlala omanzi multivarka off. Uketshezi udinga ukuthatha ngokuthi esikhathini ukuhwamuka ashiselwe iqolo.
Iphalishi e multivarka kuphekwe kahle ngokuvumelana zokupheka kuhlinzekiwe imiyalelo kudivayisi. Kodwa ulandele kubo ngokuqinile akudingekile, inani zokupheka ezivamile kungenziwa kalula bazivumelanisa multivarka. Pheka iphalishi izikhathi eziningana, ungalungisa umsungulo okusanhlamvu ukunambitheka yakho.
izindlela ezihlukahlukene Multivarki ukulungiselela izinhlobo ezahlukene wokudla. Mode "pilaf / Buckwheat" ukupheka lokudlela crumbly, futhi imodi "Ubisi iphalishi" ikuvumela ukulungisa isidlo viscosity. Ngokuba ukulungiswa okuqinile noma crumbly wokudla oluthile lokudla namanzi isetshenziswa kwezinye izindlela oluthile lokudla singavalwa ubisi.
Ajwayelekile kakolweni iphalishi e multivarka Uthola ukunambitheka ekhethekile futhi umsungulo. Uma ungasebenzisa beaker ithebhu, nge apharathasi, noma evamile 200-igramu inkomishi. Okokuqala udinga uthele a multi-imbiza 3 beakers yamanzi, engeza ingcosana nosawoti kanye nenkomishi zokusanhlamvu. multivarku Vala, ukuhlela isimo "pilaf / Buckwheat" bese ulinde ithoni ezwakalayo.
Kusukela ngemuva kokuphothulwa lisebenze ukupheka ingena imodi Ukushisa, iphalishi e multivarka siyaqhubeka bayethe. Ukudla umphumela ubizwa etholwe esithandweni Russian. Inikeza ekhethekile ukunambitheka iphalishi ibhotela, ukubeka ngokushesha emva ithoni.
Ithanga iphalishi e multivarka okulungiselelwe usebenzisa ubisi. Akuwona wonke umuntu uthanda ukunambitheka dampish ithanga, okuvela kulo, Nokho, kulula ukuqeda, pre-Fry it. Nakhu kanjani kungenziwa nge Multivarki. Imodi Ukuvula, ngokuvamile uya yokuwugazinga, uthele isipuni amafutha omnqumo noma yimuphi omunye uwoyela. Esikhathini amafutha hot ukubeka ithanga Diced futhi kancane yayo kuphekeke, sibhebhezela ngokushesha nge plastic noma spatula lokhuni. Kuzoba ukunambitheka okumnandi ithanga, ungakwazi uqhubekele esigabeni esilandelayo ukupheka.
Ithanga kahle okusanhlamvu: amabele, ilayisi emakhobeni, ukolo encane efana "Artek". On the lelungiselelwe ungqimba ithanga ubuthongo iqolo futhi uthele zonke ubisi. Olinganise Balinganiselwa: 500 g ithanga, 100 g okusanhlamvu, 2-2.5 izinkomishi ubisi. Inani ubisi kuxhomeke ekutheni viscosity wokudla ezidingekayo ngesikhathi okukhiphayo. ivolumu wathi unika iphalishi naphakathi viscosity.
Iphalishi ithanga okuphekwe kwimodi Multivarki "Ubisi iphalishi". Ukusetha isikhathi - imizuzu 40-45. Azungeze phakathi ukupheka, ungakwazi ukwengeza izithako engeziwe: amagremu 100 ushukela, 100-150 g omisiwe 1-2 apula ehlutshiwe asikiwe. flavour engeziwe njengoba vanilla noma nesinamoni futhi eyamukelekayo, lowo muntu udinga ukugxila ukunambitheka kwabo siqu izintandokazi.
Amnandi Futhi okunempilo ujamu viburnum: kadokotela embodiments eziningana
Njengoba usawoti mackerel esihlwabusayo ekhaya
Indlela jam kusuka strawberry